China HDPE biogas ravina fanamboarana sy orinasa | Lonovae
Takelaka biogas HDPE
Ny HDPE novokarin'ny orinay dia matetika ampiasaina any amin'ny farihy artifisialy, farihy trondro, sy ny toerana rehetra izay mila tsy ho voatanisa. Ny hatevin'ny sarimihetsika dia mety ho 0.2-2.0 mm. Ny ampahany mahazatra ankapobeny dia 6 * 50 metatra sy 300 metatra toradroa. Ny hateviny dia 1 ka hatramin'ny 0,8 mm. Mizara ho takelaka tsy tantera-drano sy membrane tsy mety ritra, vokatra: ao anatin'izany ny geomembrane LDPE, geomembrane LDPE, geomembrane HDPE, geomembrane EVA, geomembrane ECB, geomembrane PVC, geomembrane ambonin'ny tany, sns.
Anarana HDPE geomembrane
sakany 3m-8m （6m gernerally）
halavan'ny 6-50m （toy ny namboarina）
hakitroky 950kg / m³
Fitaovana HDPE / LDPE
Fampiasana Biogas, Dobo trondro sy farihy artifisialy sns.
1. HDPE geomembrane dia fitaovana mora tantera-drano tsy manam-paharoa coefficient (1 × 10-17 cm / s);
2. HDPE geomembrane manana fanoherana hafanana tsara sy fanoherana mangatsiaka, ary ny mari-pana amin'ny tontolo iainana dia hafanana avo 110 ℃, mari-pana ambany -70 ℃;
3. HDPE geomembrane dia misy fitoniana simika tsara ary afaka manohitra ny harafesin'ny asidra mahery, alkaly ary solika. Izy io dia fitaovana tsara fanoherana ny harafesina;
4. HDPE geomembrane dia manana tanjaka avo lenta, ka manana tanjaka avo lenta hamaly ny filan'ny tetikasa injeniera avo lenta;
5. HDPE geomembrane dia manana fanoherana toetr'andro mahery, fanatanterahana fanoherana ny fahanterana mahery vaika, ary afaka mitazona ny zava-bita tany am-boalohany rehefa naseho nandritra ny fotoana ela;
6. Ny fahombiazan'ny geomembrane HDPE. Ny geomembrane HDPE dia manana tanjaka matanjaka sy manitatra amin'ny fiatoana, izay ahafahan'ny geomembrane HDPE ampiasaina amin'ny toe-piainana ara-jeolojika sy toetr'andro. Ampifanaraho amin'ny fananganana jeolojika tsy mitovy, fangejana mahery!
7. HDPE geomembrane dia vita amin'ny plastika virjiny avo lenta ary ny sombina mainty karbaona dia tsy misy preservatives. HDPE dia nampiasaina teto amin'ny fireneko hisolo ny PVC ho akora ilaina amin'ny kitapo fonosana sakafo sy sarimihetsika mifikitra.
1 Fanoherana an-keriny amin'ny toeram-pitsaboana, toerana maloto na toeram-pitsaboana sisa tavela.
2. Fiampitana renirano, tohodrano, farihy, tohodrano ary faritra fitahirizana, fantsona, fitahirizana (lavaka, toeram-pitrandrahana).
3. Ny làlana fanoherana ny seepage an'ny metro, ny lakaly, ny tonelina ary ny tonelina.
4. Ny sisin-dàlana sy ny fototra hafa dia masira sy manohitra ny renirano.
5. fonony sy fonony manify manohitra ny vodin-tany eo alohan'ilay tohodrano, sosona anti-seepage mitsangana amin'ny fototra, fananganana cofferdam, tokotanin'ny fako.
6. Fambolena ranomasina sy fiompiana anaty rano velona.
7. Ny fototry ny làlambe, ny làlambe ary ny lalamby; ny sosona tsy misy rano amin'ny tany mivelatra sy loess azo ahetsiketsika.
8. Fisorohana ny tafo.
Teo aloha: Vata misy legioma
Manaraka: tabilao finday pp ho an'ny lojika
Fehin-kibo manala fehikibo PP